Gabadhaan waxaa shaqada loogu diiday xijaabka dartiis | Somaliska
Gabadha lagu magacaabo Banin Maki ayaa bishii hore waxay shaqo ka raadsatay maqaaxida Subway, iyadoo loogu wacay wareysi. Ka dib markii ay soo xaadirtay wareysiga oo ay aad ugu faraxday ayaa loo sheegay in aysan halkaasi ka shaqayn karin haddii aysan xijaabka iska dhigin.
“Waan tagay aniga oo aad u faraxsan, maamulaha waa uu faraxsanaa oo waxa uu durbadiiba ii sharaxay sida loo shaqeeyo iyo mushaarka. Ka dib ayuu i waydiiyay sida aan ka yeelanyo xijaabka.” ayay tiri Banin.
Iyada oo aan fahmin su’aashiisa ayay waydiisa waxa uu ka waddo, isagoo u sheegay in aysan xijaabka xiran karin haddii ay ka shaqaynayso Subway. Markii Banin ay u sheegtay in aysan iska dhigi karin xijaabka, ayuu uu soo xiray wareysigii.
“Waligay uma qalbi jabin sidaas oo kale. Waxa uu igu qiimeeyay xijaabka oo keliya. Waa adagtahay in aad shaqo hesho adiga oo xijaabka xiran, laakiin isma oran xijaabka dartiis ayaa shaqo laguugu diidi doonaa.” ayay hadalkeeda ku dartay Banin.
Wargeyska Metro oo la xiriiray ninkii wareysiga ka qaaday Banin ayuu ku yiri:
“Nooma shaqeeyaan dadka sidaas oo kale u eg, waxaan siiyay fursad si ay waxyar isku daboosho balse ma aqbali karno in ay xijaabka xirato. Sharcigeena uma badali karno hal qof dartiis, haddii kale shaqaalaha kale ayaa ku dayanaya.” ayuu yiri.
Shaqaalaha Subway ayaa waxay xirtaan dhar u gaar ah iyo koofi. Banin ayaa sheegtay in ay diyaar u ahayd in ay xirato dharkaas oo koofida ka kor qaadato xijaabka.
Shirkada Subway ayaa ah mid maqaaxi kasta uu leeyahay milkiile gaar ah, iyadoo laga maamule xarunta weyn ee Subway. Ali Gharaee oo ah afhayeenka Subway ayaa sheegay in aysan Subway lahayn sharci mamnuucaya xijaabka isla markaana ay wadahadal la gali doonaan milkiilaha maqaaxida gabadha shaqada u diiday. Isagoo intaasi ku daray in ay xiriir la sameyn doonaan Banin.
allaahu akbar illaahow kuwaan nooga soo roonow diinta xataa waa lagugu7å
waa runten Sverige shaqo kama helaysid hadaad xijaaban tahay. waa cajib taas intaasna Runtii ragyigaas waa mid aad u xun
in ay u dacwooto gardoonka takooridda aa ku fiicnaanlaheed oo lacag lagu ganaaxo midka u diiday iyo subway ba.
July 2, 2016 at 13:36
Sara walalo aney iigu dhacdey in shaqo iyo magaca muslimnimada la iigu diidayo shaqada Arbetsförmedlingen intaasna waxay ku leeyihiin shaqo raadso Taas waa West of time.Ilaah meel kheer noogu jiro Allahu Sahlo tan waa Cabiid.
wey ogyihiin dadkii xijaaban in shaqo la siin.yaa beenta as lagu sheegey
taasi waa mid na haysato oo aan sababteeda anaga isu keenay waayo anaga aya wadamadeena soo duminay oo wadamo kale oo aan nagu diin ahayn u soo haajirnay waxan ilaah ka baryeynaa in ilaah nabad ka dhigo caalamul silaam oo muslimiinta towfiiqda haleelsiiyo aamiin
waa wadan gaalo allow ha nagu fidnayn
July 3, 2016 at 03:31
Haday sidaas u jeceshahay diinteeda ma ahayn inay marka horeba meel doofaar iyo khamri laga shaqeeyo inay shaqo ka raadsato. Dambi ayunbay ka faaiidi lahayd.
Sabata looga diiday shaqadda waxaan u maleynaa in ay tahay MAQAAYADA waxaa lagu gadaa doofaar dhowr nooc LOO sameeyo iyaduna waa qof muslim ah mana u banaano hadeynan is indho tireyn iney ka shaqeyso .Ogaada waxa maqaayadaas laga cuno